Ha niile nyere ụfọdụ, ụfọdụ enye ha niile. Daalụ. | Martech Zone
Nkwupụta nke Onye isi ala United States nke America
Na Vbọchị Ndị Ochie, anyị na-asọpụrụ maka ọrụ na ịchụ àjà nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-agbachitere nnwere onwe anyị ji obi ike eyi uwe nke United States.
Site na ọhịa na oke ohia nke Europe agha tisasịrị rue oke ọhịa nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, site n'ọzara nke Iraq ruo n'ugwu Afghanistan, ndị nwere obi ike mba ahụ chebere ebumnuche nke Mba anyị, napụta ọtụtụ nde mmadụ n'aka ọchịchị aka ike, ma nye aka gbasaa nnwere onwe gburugburu ụwa. Ndị agha ndị agha America zara oku ahụ mgbe a gwara ha ka ha chebe mba anyị n'aka ụfọdụ ndị ọchịchị aka ike na ndị obi ọjọọ, ndị na-eyi ọha egwu, na ndị agha ụwa mara. Ha guzoro ọtọ n'agbanyeghị nnukwu ihe egwu wee mee ka Mba anyị bụrụ ikike kachasị ukwuu maka nnwere onwe n'akụkọ ihe mere eme mmadụ. Ndi otu agha, ndi agha, ndi agha, ndi agha, na ndi nche nchebe azala oku di elu ka ha je ozi ma nye aka chebe America n’oge obula.
Mba anyị na-ekele ndị agha anyị oge niile maka obi ike ha dị jụụ na ọrụ n exemomi. Anyị na-echetakwa ma na-asọpụrụ ndị tinyere ndụ ha n'ịgbachitere nnwere onwe. Ndị a nwere obi ike ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị chụrụ ihe kachasị mkpa maka abamuru anyị. N'ụbọchị ndị ochie, anyị na-echeta ndị dike a maka obi ike ha, iguzosi ike n'ihe ha, na nraranye ha. Onwe ha na-achọghị ọdịmma onwe ha naanị na-akpali anyị taa ka anyị na-arụ ọrụ iji kwalite udo ma gbasaa nnwere onwe gburugburu ụwa.
N’ịkwanyere ugwu na ịkwanyere onyinye ndị otu anyị nyegoro na-akpata udo na nnwere onwe gburugburu ụwa, ọgbakọ omebe iwu nyere (5 USC 6103 (a)) na Nọvemba 11 nke afọ ọ bụla ka aga-ewepụta dị ka iwu. ezumike ezumike iji sọpụrụ ndị agha America n'oge ochie.
UGBU A, N’IHI a, M, GEORGE W. BUSH, Onye isi ala nke United States nke America, na-ekwupụta ugbu a na Nọvemba 11, 2008, dị ka Day Veterans ma na-agba ndị America niile ume ka ha debe Nọvemba 9 site na Nọvemba 15, 2008, dị ka National Week Awareness Week. M na-agba ndị America niile ume ka ha mata obi ike na ịchụ àjà nke ndị agha anyị site na mmemme na ekpere. M na-akpọ Federal, State, na ndị isi obodo ka ha gosipụta ọkọlọtọ nke United States na ịkwado na isonye na ọrụ ịhụ mba n'anya n'obodo ha. A na m akpọku ndị otu na-ahụ maka otu nzukọ na nke ụmụnne, ebe ofufe, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ịlụ, na ndị mgbasa ozi iji kwado mmemme a nke mba na iji okwu ncheta na mmemme.
N'ỌM WHAKA, enyere m aka m ụbọchị nke iri atọ na otu nke Ọktoba, n'afọ nke Onyenwe anyị puku abụọ na asatọ, na nke nnwere onwe nke United States nke America narị abụọ na iri atọ na atọ.
Tags: Radionjikọ slideshareBè SEO